August | 2016 | AMAPHUPHO
By info on August 29, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ubona izinkukhu kusho izinto ezinhle ingqobo nje uma zingekanye namatshwele. Ngaphandle kwamatshwele iphupho lisho ukuthi uzoba nenjabulo kanye nempumelelo kodwa uma kunamatshwele kusho ishwa ukwenqatshwa kanye nokulahlekelwa ikakhulukazi kwezothando noma emsebenzini.
By info on August 27, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha usonqenqemeni lwesiwa kusho ukuthi kukhona okusemqoka okuzokwenzeka ebudlelelwaneni bakho maduze. Uma ushadile kusho ukuthi kungenzeka ube nomntwana. Uma kodwa ulenga kwisiwa kukhona okubambile kusho ukuthi othile uzama ukukuqalekisa futhi kufanele uthole usizo kumelaphi.
By info on August 24, 2016 in amaphupho nezincazelo
By info on August 21, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi uyabhala kusho izinto ezinhle uma iphepha lihlanzekile linobunono – uzoba nomshado onenjabulo kanye nezingane ezinhle. Uma uzama ukubhala kodwa ungakwazi noma uklebhula iphepha kusho ukuthi awuhlakaniphile ngendlela oyicabangayo futhi uzozithola usenkingeni maduzane.
By info on August 14, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi uzacile noma siyehla isisindo sakho kusho ukuthi kunenkathazo ezayo. Kusho nokuthi ungalahlekelwa yimali ekusaseni lakho Đ ngakho-ke qaphela ukuthi uyisebenzisa kanjani nokuthi uyiboleka bani. Kodwa uma uphupha ukuthi uyisidudla kusho ukuthi uzolwa nophathina wakho.
YouTube: Amaphupho ngemali
By info on August 13, 2016 in amaphupho nezincazelo
By info on August 12, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ubona ulwandle kuyinhlanhla uma amagagasi ezolile kanti ishwa uma egubha ngokhahlo. Uma amagagasi emakhulu futhi ekushaya ekuwisa kusho ukuthi kofanele usebenze kanzima ukuze uphumelele. Uma uhamba phezu kwamanzi kusho ukuthi uyoba nempumelelo kokwenzayo ikakhulukazi uma ushada.
By info on August 8, 2016 in amaphupho nezincazelo
Uma uphupha ukuthi ulahlekelwe elinye lamehlo akho kusho ukuthi kunengozi emzini wakho futhi kufanele uqaphele. Uma ukhala ungakhathazeki kusho ukuthi kunenjabulo ezayo kuwe maduzane nje. Kepha uma udinga izibuko ephusheni lakho kusho ukuthi kukhona ozokujikela obucabanga ukuthi ungamethemba.